Dhibaatada Tahriibka iyo Hayaanka Dhalinyarada. Qalinkii Suleiman Bashir Omar | Salaan Media
Qormadan ayan si kooban ugaga hadli doonaa Tahriibka iyo Dhalinyarada Maanta oo baryahan danbe aad u soo kordhay dhalin badana ay ku nafwaayeen. Hadaba Tahriibow Maxaad tahay?
Tahriib waa qof raba inuu si sharci darro ah ku galo wadankale oo an laga ogolayn, Sidoo kale waxa uu noqon karaa mid lagu kootarabaaninayodad la doonayo in sida alaabta loo geliyo meel aanay si sharci ah ku geli Karin, Tahriibka dadku waxa uu ka mid yahay falal denbiyeedyada qawaaniinta caalamku la dagaalanto lana mid ah falal denbiyeedyada tahriibinta maandooriyaasha iyo hubka. Tahriib waa socdaal aan sharci loo haysan oo dhuumasho iyo Rafaad ku salaysan, kaas oo uu qofku naftiisa ku biimeeyo waxyaabo khatar ah.
Si kastaba ha ahaatee waxaan shaki ku jirin oo aan indhaha laga qabsan karin In dhalinta Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu badan tahriibayaasha maanta.
Hadaba dhibaatooyinka ay waajahayaan Tahriibayaasha ayaa waxaa ka mid ah dhimasho, Xarig, Dhac, Qafaalasho, Madax furasho loo qabsado kumanaan Dollar iyo kufsi loo geysto qaar ka mid ah haweenka.
Waxaynu ognahay in dad badan oo tahriibay hilibkoodu daadsanyahay Xeebaha ay tahriibka ku maraan, qaarkood waxay mayd ahaan u yaaliin Saxaraha iyo Xeebaha marinka u ah dhalinta tahriibayaasha ah, imisa Hooyo ayaa ku wayday wiilkeedii iyo Gabadheedii Qaaliga ahaa oo ay in badan soo koolkoolisay oo Maanta ay u suurto gali wayday inay xataa aragto maydadkooda?. Geeri xasuusbay kugu dishaa. waa hubaal in hooyadaasi maanta ka walwalsantahay oo ay dareensantahay jiidhkeedii oo kulumay Hanfiga saxaraha iyo mawjadaha badda.
Imisa dhalinyaro ah ood taqaan ayaa ku jira xabsiyada Ethiopia, Sudan, Libya iyo Dalal kale oo badan, Imisa Haween ah aya lagu faraxumeeyay oo noloshoodi & Mustaqbalkoodiiba ku waayay Tahriib.
Waynu ognahay wixii dhawaan ku dhacay dhalinyaro badan oo ku nafwaayay badda u dhaxaysa Libya iyo Talyaaniga. Adigana miyad ku fikiraysaa inaad maanta waalidkaagi wal-wal ku abuurto maydkaagana ka qariso oo markasta waalidka u haysto inad nooshahay adoo maydkaagii saxaraha iyo xeebaha yaalo. Adigana aad mustaqbalkaagi iyo noloshaadiba sidas ku waydo. Walaalka tahriibayow intaad kharash iyo rafaad ku bixinayso miyaad Ilaahay talo saaratid ood naftaada wax u baratid, miyad Aayahaaga iyo kan dadkiina ka fikirtid, noloshaada iyo mustaqbalkaaga danbana aad dhistid. Waxan ku talinayaa in laga fogaado lana hortago Tahriibka oo lagu dadaalo sidii wax loo baran lahaa, Dalkana wax loogala soo bixi lahaa Bad iyo Barri. Ilaahay waxan ka baryayaa inuu inaga nabad galiyo Masiibada Tahriibka dhamaanteenba. Ameen. Ameen.